Monday February 17, 2020 - 11:47:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sawirka Madaxii hore ee sirdoonka Kenya
War kasoo baxay Wasaarada arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada Kiris Karumba oo ahaa safiirka dowlada Kenya u fadhiyo magalada Jubba, inkastoo aan la shaacin qaabka ay u dhacday geeridiisa.
Bayaan kooban oo kasoo baxay Wasarrada ayaa lagu yiri "Saqdii dhexe ee xalay ayuu xanuun degdeg ah kusoo booday safiirka kadibna waxa uu ka dhacay sare joogga xanuunkaas oo sababay geeridiisa, daqiiqado yar kadib markii gaadiidka Aambalaasta ay halkaasi soo gaareen".
Warbahinta Kenya ma shegin wax xanuun ah oo uu horay u qabay Safiirka Kenya ee koofurta dalka Sudan sidoo kalena waxa ay farta ku fiiqeen inuu mugdi ku jiro qaabka ay u dhacday geeridiisa maadama ehelkiisa laga mamnuucay in ay bixiyaan wax tafaasiil ah dowladuna ay dhacdadan ku tilmaantay mid qarsoodi ah.
Kiris Karumba horay wuxuu horay usoo noqday noqday Agaasimaha Hay'adda Sirdoonka Kenya ee magaceeda lagusoo gaabiyo N.I.S, waxaana shaqada Safiirnimo loo magacaabay Bishi July sanadki 2018ka kadib wareegto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Ma cadda qaabka ay u dhacday geerida agaasimihi hore ee sirdoonka Kenya hadana ahaa Safiirka dalkaasi u fadhiyo Koofurta Sudan balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa in macluumaad dheeraad ah laga helo qaabka ay wax u dheceen.